Semalt: WordPress थीम्स - तिनीहरूलाई परिवर्तन गर्न राम्रो छ?
यदि तपाईंसँग एउटा वेबसाइट छ र नयाँ WordPress विषयवस्तु फेला पार्छ जुन तपाईंको अघिल्लो विषयवस्तुभन्दा उत्तम र बढी उपयुक्त देखिन्छ भने तपाईंले यसलाई यथासक्दो चाँडो परिवर्तन गर्नुपर्नेछ। यदि तपाइँ डराउनुहुन्छ कि वर्डप्रेस विषयवस्तु परिवर्तन गर्नाले तपाइँको सामग्री वा सेटि settingsहरू हराउनेछ, तपाइँ बिल्कुल गलत हुनुहुन्छ। WordPress विषयवस्तुहरूको उद्देश्य हाम्रो साइटहरू र ब्लगहरूलाई अविश्वसनीय दृश्य दिनको लागि हो, हाम्रो सामग्रीको सेटिंग्स र स्थान गडबड नगरी।
विषयवस्तु फाउन्ड्री हो जहाँ तपाईं थिमहरूको एक ठूलो संख्या फेला पार्न सक्नुहुनेछ, र सबै भन्दा राम्रो पक्ष यो हो कि तपाईंले तपाईंको पोष्टहरू, फोटोहरू, पृष्ठहरू, र अडियो फाईलहरू गुमाउँदा चिन्ता लिनु पर्दैन। सबै सामग्रीहरू वर्डप्रेस डाटाबेसमा सुरक्षित रूपमा भण्डार गरिएको छ, र नयाँ विषयवस्तु तपाईंको लागि कुनै समस्या पैदा गर्दैन।
इभान कोनोवालोभ , Semalt का शीर्ष विशेषज्ञ, यहाँ तपाइँले आफ्नो WordPress विषयवस्तु परिवर्तन गर्दा तपाइँले हेर्नु पर्छ केहि चीजहरूको समीक्षा गर्नेछ।
अनुकूलन पोष्ट प्रकारहरू:
यदि तपाईं थिम प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ जुन कस्टम पोस्ट प्रकारहरू सिर्जना गर्दछ भने, तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ कि तपाईंको अधिकांश पोष्टहरू तुरुन्तै हराउनेछन्। तर त्यहाँ चिन्ताको विषय छैन किनकि अनुकूलन पोष्ट प्रकारहरूले तपाईंको वर्डप्रेस खातामा शीर्ष-स्तर मेनू आईटमहरू देखाउँदछ। यसको मतलव तपाईले सजीलै फाईलहरू पुन: भण्डारण गर्न सक्नुहुन्छ र तपाइँको साइटलाई सामान्य रूपमा काम गर्न सक्नुहुन्छ। ग्राहक प्रशंसापत्र वा ग्यालरीहरू दुई अनुकूलन पोष्ट प्रकारहरू छन् जसको साथ तपाई जानुपर्दछ। मलाई यहाँ बताउन दिनुहोस् कि पोस्टमेटिक, सर्फ अफिस, ये डेव, र हजारौं समान व्यवसायले आफ्नो साइटहरू मेक, एक वर्डप्रेस विषयवस्तुमा चलाउँछन् जुन दुबै पेशेवर र प्रयोगकर्ता-मैत्री छ।
यदि तपाईंले आफ्नो WordPress विषयवस्तु परिवर्तन गर्नुभयो भने, तपाईं अनुकूलन मेनूहरू सेट अप गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि, तपाईंले तिनीहरूलाई दृश्य ea मेनू विकल्पबाट सिर्जना गर्नुपर्नेछ। यसले तपाईंको नेभिगेसन मेनूको प्रदर्शन नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्दछ र एक प्रभावी माध्यमिक मेनूको रूपमा कार्य गर्दछ। जब तपाइँ वर्डप्रेस विषयवस्तुहरू परिवर्तन गर्नुहुन्छ, यो निश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ तपाइँको अनुकूलन मेनू सेट गर्नुभयो र सबै मेनुहरू असक्षम गर्नुहोस् जुन प्रयोगमा छैनन् र तपाइँ नयाँ थिमबाट गायब भएका छन्। एकचोटि तपाईंको विषयवस्तु परिवर्तन भएपछि तपाईंले नयाँ नयाँ मेनूहरूलाई तोक्नु पर्ने हुन्छ किनभने प्रत्येक विषयवस्तुले सबै मेनूहरूलाई पूर्वनिर्धारित स्थानहरूमा सेट गर्दछ, तपाईंको साइटको समग्र रूप बिगार्न।
मेनूहरू जस्तै, तपाईंको विजेटहरू परिवर्तन गरिएको स्थानको समस्याबाट ग्रस्त हुनेछन्। वर्डप्रेस विषयवस्तुहरू सबै उपलब्ध विजेटहरू मात्र प्रदर्शन गर्नको लागि डिजाइन गरिएको हो, र यदि तपाईं केही नयाँ विजेटहरू लुकाउन वा देखाउन चाहानुहुन्छ भने तपाईंले त्यसलाई मेनुअल्ली गर्नुपर्नेछ। तपाईं दृश्य → विजेटहरू सेक्सनमा नेभिगेट गरेर तपाईं विजेटहरू ठीक गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईं म्याक प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईं सिफ्ट + सीएमडी + push थिचेर सम्पूर्ण स्क्रीनको स्क्रिनसट लिन सक्नुहुनेछ।
हामी परिवर्तित WordPress विषयवस्तुहरूको कसरी परीक्षण गर्छौं?
नयाँ वर्डप्रेस विषयवस्तुको परिक्षण गर्ने उत्तम र सजिलो तरिका मध्ये एक दृश्य → थिम पृष्ठमा पूर्वावलोकन विकल्प प्रयोग गरेर हो। मलाई यहाँ भन्नुहोस् कि यो विकल्पले सँधै सहि नतिजा दिदैन, त्यसैले तपाइँ आफ्नो विषयवस्तु प्रकाशित गर्न चाहानुहुन्छ कि यो तपाइँको वेबसाइट वा ब्लगका लागि राम्रो छ कि छैन भनेर जाँच्न सक्नुहुन्छ।
निष्कर्ष - परिवर्तन राम्रो छ:
यो सत्य हो कि WordPress विषयवस्तु परिवर्तन गर्नु राम्रो हो किनकि यसले अधिकाधिक मानिसहरूलाई संलग्न गराउँछ। नयाँ थिमहरूले तपाईंको साइटलाई नयाँ रूप र प्रभावशाली व्यक्तित्व दिन्छ। एकै साथ तपाईले आफ्नो फाईलहरू ब्याकअप गर्नुपर्नेछ र वर्डप्रेस वेबसाइटको नयाँ रूपलाई अँगाल्न तयार हुनुपर्दछ।